Ny siansan olombelona sy ny siansa ara-tsosialy na siansa ara-piara-monina dia vondron-taranja siantifika mandinika ny toetra sosialy sy ny zava-misy aminny olona. Ampififanohirana aminny siansa natoraly sy ny siansa marina ny siansa sosialy. Ny taranja voasokajy aminny siansa ara-tsosialy dia ny tantara sy ny filôzôfia Araka ny dika notsorina avy aminny rakibolana, ny siansan olombelona dia mandinika ny kolontsainny olomebola, ny tantarany, ny zava-bitany, ny fomba fiainany sy ny toetra ny tsirairay sy sosialy, kanefa ny siansa ara-tsosialy dia mandinika ny fiara-moninny olombelona, entit ...
Amin’ny biby mampinono, ny fanalan-jaza dia ny fifaranana ny fitondram-bohoka alohan’ny fiterahan’ny zazakely. Afaka tonga ho azy ny fanalan-jaza, matetia noho ny zavatra tsy nety tao amin’ny fitondrana vohoka. Rehefa itranga izany, dia atao hoe afa-jaza. Ny olombelona dia afaka mamarana ihany koa ny fitondrana vohoka alohan’ny fiterahana. Ny firenena dia samy manana ny lalàny mikasika ny fanalan-jaza. Rehefa tsy azo atao ny fanalan-jaza dia maro ireo faninganana izay ahafahana manao izany: firaisana amin’olom-pady, fanolanana, kilema amin’ny zaza hoteraka na fitondram-bohoka mety hampidi- ...